Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan!! – Xeernews24
Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan!!
25. Juni 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
June 25, 2018 (Istanbuul,XeerNews24.com)
Magaciisaoo buuxaa waa Recep Tayyip Ahmet Erdogan. Wuxuu dhashay sannadkii 1954-kii. Wuxuu ku dhashay degaanka la yidhaa Kasimpasa oo jaar la ah caasimada Istanbul. Aabihihii wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidan ilaalada xeebaha ee Turkiga. Hooyadii oo la oran jiray Tensile waxay ahayd gabadh ka shaqaysa horumarinta dumarka muslimiinta aduunka. Waxay ahayd gabadh caan ku ah khudbaha iyo abaabulka bulshada. Waxay dhimatay sannadkii 2011-kii. Halka aabihii uu dhintay sannadkii 1988-kii.
– Sanadkii 1974-kii ayuu galay jaamacada ku taal Turkiga. Wuxuu bilaabay inuu barto dhaqaalaha iyo ganacsiga. Markii uu jaamacada ku jiray wuxuu aad xariif ugu ahaa kubadda cagta.
Waxa kale oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaa ururuka ardayda jaamacada.
– Sanadkii 1978-kii ayuu guursaday xaaskiisa Emine Gulbaran. Waxay ku kulmeen shir caalami ah oo uu ka qayb galay, waxaana halkaasi ka bilaabay xidhiidhkooda. Jacayl xagiisa ka yimid ayaa keenay inay is-calfadaan. Waxay isu dhaleen laba wiil iyo laba gabdhood. Waxaa wiilasha lagu kala magacaabaa: Ahmet Burak iyo Necmeddin Bilal iyo gabdhaha oo kala ah: Esra iyo Sumeyye.
– Sanadkii 1994-kii ayaa loo doortay duqa magaalada istaanbuul, oo wakhtigaasi ahayd magaalada ugu weyn dhinaca ganacsiga dalka Turkiga iyo weliba yurubta bari. xilligan waxaa magaalada istaanbuul haystay dhibaatooyin kala duwan sida, biyo yaraan, cidhiidhi xagga waddooyinka ah, khashin yaalla meel kasta iyo hawo wasakh iyo wixii la mid ah.
Muddadii uu xilkaasi hayey oo ahayd 1994-kii ilaa 1998-kii wuxuu xaliyey dhammaan dhibaatadii ka jirtay magaalada Istanbuul.
Wuxuuna sameeyey toddoba Buundo oo keenay in laga baxo cidhiidhigii waddooyinka. Shacabka reer Istanbuul ayaa u riyaaqay qorshihiisa. Taasoo keentay inay kor-u-kacdo sumcadiisu. Waxa kale oo ku guulaystay shahaado caalami ah oo ay bixiyaan Qaramada Midoobay.
– Sanadkii 1998-kii dabayaaqadiisi ayaa lagu xukumay toban bilood oo xadhig ah, kadib markii ay xoogeysteen xisbigii Cilmaaniyiinta ahaa, waxaana waxba kama jiraan lagu tilmaamay Dastuurkii dalka Turkiga. Waxaana amar lagu siiyey inaanu ahayn duqa magaalada Istanbul. Waxaanu xukunkiisu dhammaaday horaantii sannadkii 1999-kii.
– Sanadkii 2011-kii waxaa dhacay doorasho guud dalka oo dhan.
Waxa mar saddexaad guulaystay xisbiga (AKP). Ka dib xisbigii ayaa mar saddexaad dib u magacaabay Raysal-wasaare Erdogan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/trumperdogan1.jpg 473 700 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-25 17:19:172018-06-25 17:21:33Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan!!
Daawo: Banaanbixii ujeedda xun ee magaalada Jijiga iyo Kii Diridhaba oo isku... Deg Deg Tigree oo gabalkoodii dhacay iyo Generaal Gabree oo jagaafta loo la...